စတော့ရှယ်ယာလဲလှယ်နေ့၌မျှဝေမှုများကုန်သွယ်၏အစအဦးထံမှအစုရှယ်ယာကုန်သွယ်၏အသံအတိုးအကျယ် Alphabet Inc. ယနေ့နှင့်အရင်းအနှီး၏သမိုင်း Alphabet Inc. GOOG ။
Alphabet Inc. ရှယ်ယာစျေးနှုန်း အွန်လိုင်းဇယား ကုန်ကျစရိတ်များ၏သမိုင်း Capitalization အမြတ်အစွန်း ဝင်ငွေရရှိမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
Alphabet Inc. အရင်းအနှီး
ယနေ့ Alphabet Inc. ၏ဈေးကွက်အရင်းအနှီး 1 717 181 480 960 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဖြစ်ပါတယ်။
-30 828 134 400 $ (-1.76%)
Alphabet Inc. အွန်လိုင်းအရင်းအနှီးများကိုဒေါ်လာဖြင့်ဒေါ်လာ။ ယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Alphabet Inc. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းအားလုံး၏ပေါင်းလဒ်သည် Alphabet Inc. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏အရင်းအနှီးဖြစ်သည်။ Alphabet Inc. ၏အရင်းအနှီး၏သတင်းအချက်အလက်ကိုသာရည်ညွှန်းသည်။ Alphabet Inc. အရင်းအနှီး - 1 717 181 480 960 အမေရိကန်ဒေါ်လာ။
ကုန်သွယ်မှု Alphabet Inc. အသံအတိုးအကျယ်
ယနေ့တွင်အစုရှယ်ယာ Alphabet Inc. တွင်ကုန်သွယ်၏အသံအတိုးအကျယ် 1 041 314 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ပမာဏ။
+123 551 $ (+13.46%)
Alphabet Inc. ကုန်သွယ်မှုသည်အမျိုးမျိုးသောစတော့အိတ်ချိန်းများတွင်လဲခြင်းဖြစ်သည်။ Alphabet Inc. အတွက်နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုဇယားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှိသည်။ Alphabet Inc. အွန်လိုင်းစတော့အိတ်ချိန်းအများစုတွင်အွန်လိုင်းမှကုန်သွယ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်တစ်နေ့လျှင် Alphabet Inc. ၏စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုဖော်ပြသည်။ Alphabet Inc. အရင်းအနှီးသည် $ -30 828 134 400
Alphabet Inc. စျေးကွက်ထုပ်ဇယား
Alphabet Inc. အရင်းအနှီးကိုနှစ်ဂဏန်းဖြင့်အမြတ်ထုတ်ရန်။ -6.35 တစ်ပတ်ကို% - Alphabet Inc. ၏စျေးကွက်အရင်းအနှီးပြောင်းလဲမှု။ 31.74 တစ်နှစ်လျှင်% - စျေးကွက်အရင်းအနှီးပြောင်းလဲမှု Alphabet Inc. ။ Alphabet Inc. အရင်းအနှီးသည်မနေ့ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျော့နည်းသွားသည်။
Alphabet Inc. အရင်းအနှီးသမိုင်း
27/01/2022 1 717 181 480 960 $
26/01/2022 1 748 009 615 360 $
25/01/2022 1 687 520 542 720 $
24/01/2022 1 685 666 660 352 $
21/01/2022 1 748 951 760 896 $
20/01/2022 1 812 327 563 264 $
19/01/2022 1 833 663 987 712 $
Alphabet Inc. အသံအတိုးအကျယ်ဇယား
Alphabet Inc. အသံအတိုးအကျယ်သမိုင်းဒေတာ
ရှယ်ယာပမာဏ Alphabet Inc. ကုန်သွယ် - GOOG ၏ရှယ်ယာများနှင့်အတူအားလုံးငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာစုစုပေါင်းပမာဏ, ရွေးချယ်ထားသောရက်စွဲသည်ကာလအတွင်းဝယ်ယူရောင်းချခဲ့သည်။
27/01/2022 1 041 314 $
26/01/2022 917 763 $
25/01/2022 791 475 $
24/01/2022 754 698 $
21/01/2022 1 612 766 $
20/01/2022 531 956 $
19/01/2022 528 335 $
Alphabet Inc. ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ယခုအခါ 27/01/2022 မှာယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 26/01/2022 တွင် Alphabet Inc. စျေးကွက်အရင်းအနှီးသည် $ 1 748 009 615 360 ဖြစ်တယ်။ Alphabet Inc. စျေးကွက်အရင်းအနှီး 25/01/2022 တန်းတူဖြစ်သည် 1 687 520 542 720 အမေရိကန်ဒေါ်လာ။ Alphabet Inc. ၏စျေးကွက်အရင်းအနှီး 1 685 666 660 352 အမေရိကန်ဒေါ်လာ 24/01/2022 မှာရှိခဲ့တယ်။
21/01/2022 Alphabet Inc. အရင်းအနှီးသည် 1 748 951 760 896 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ Alphabet Inc. အရင်းအနှီး 20/01/2022 1 812 327 563 264 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်ပမာဏ။ 19/01/2022 Alphabet Inc. အရင်းအနှီးသည် 1 833 663 987 712 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
Alphabet Inc. ၏ capitalization ယနေ့ Alphabet Inc. ၏ဈေးကွက်အရင်းအနှီးဖို့အတွက်ပြောင်းလဲနေသည် 1 717 181 480 960 $. ဖြစ်ပါသည် -1.764% မနေ့ကမွန်းလွဲပိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ရှယ်ယာကုန်သွယ်၏အသံအတိုးအကျယ် GOOG Alphabet Inc. Alphabet Inc. ကနောက်ဆုံးကုန်သွယ်နေ့၌ကုန်သွယ်ပမာဏ၏ 1 041 314 $ ရှယ်ယာပမာဏ ယခင်ကုန်သွယ်နေ့ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် +13.46% မှပြောင်းလဲသွားတယ်။
အစုရှယ်ယာ Alphabet Inc. ၏တန်ဖိုး
ချိန်းရှယ်ယာ Alphabet Inc. ဒီနေ့ယခုအွန်လိုင်း GOOG ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်း။
ချိန်းရှယ်ယာ GOOG အွန်လိုင်း
အွန်လိုင်းအစစ်အမှန်အချိန်မှာ Alphabet Inc. စတော့ရှယ်ယာကိုးကား, GOOG စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ, GOOG အချိန်ဇယား။
Alphabet Inc. သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ကုန်သွယ်၏စတင်ကတည်းကဇယား။
GOOG ယနေ့နှင့်အရင်းအနှီး၏သမိုင်း Alphabet Inc. အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရှယ်ယာပမာဏ။
ဘဏ္ဍာရေး Alphabet Inc.
ရှယ်ယာနှုန်း Alphabet Inc. ဝင်ငွေများ
သုံးလတစ်ကြိမ်အမြတ်အစွန်း Alphabet Inc. ကုမ္ပဏီ, 2022 များအတွက်အစုရှယ်ယာ GOOG ၏အမြတ်အစွန်းအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ။
ဝင်ငွေ Alphabet Inc.
ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်တွေကို Alphabet Inc. ကုမ္ပဏီ, 2022 အတွက် Alphabet Inc. နှစ်စဉ်ဝင်ငွေအပေါ်အစီရင်ခံစာ။
ratings ကုမ္ပဏီများသည် Alphabet Inc.
ကမ္ဘာကြီးကိုအဆင့်တွင် Alphabet Inc.